कसरी हुने तनाबबाट मुक्त? - newslinesnepal
कसरी हुने तनाबबाट मुक्त?
प्रकाशित मिति : ४ पुष २०७५, बुधबार १९:३७
काठमाडौ। तनाव सबैलाई हुन्छ। बच्चा, किशोर, युवा, वयस्क, बृद्धा सबैलाई। धनी, गरिब। दुर्गमका, सुगमका। शिक्षित, अशिक्षित। तनाव नहुने मानिस शायदै होलान। तनाव भनेको मानसिक दबाव हो। हाम्रो काम, करियर, भविष्य सबैले यस किसिमको दबाव पैदा गर्छ।
जबसम्म हाम्रो चेतना रहन्छ, तबसम्म तनाव हुन्छ। तनावले त्यसबेला मात्र हामीलाई पिरोल्छ, जब यसको सहि व्यवस्थापन गर्न सकिदैन। तनाव व्यवस्थापन गर्ने कुरा हो। यो निर्मुल हुने कुरा होइन। अर्थात हाम्रो जीवनमा तनाव नै आउन नदिने भन्ने हुँदैन।
तनाव आउँछ, तर त्यसलाई सहि ढंगले व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। तनाव दूर गर्ने निम्न सरल उपाय रहेको छ। जुन तपाईहरुले पनि प्रयोग गरेर तनावमुक्त बनेर आरामदायी जिन्दगी बाँच्न सक्नु हुन्छ।
१.तनाव व्यवस्थापनको सूत्र
तनाव व्यवस्थापनका लागि कुनै औषधी सेवन गर्नुपर्दैन। शल्यक्रिया पनि गराउनु पर्दैन। यो मानसिक रुपले गर्न सकिन्छ। तनाव व्यवस्थापनको लागि यो कुरा सोच्नु जरुरी छ कि, संसारमा रहेका सबै चेतनशिल प्राणीलाई तनाव हुन्छ । अर्को कुरा, तनाव आफैमा समधान होइन। त्यसैले कुनै पनि कुरामा तनाव लिइरहनुको कुनै अर्थ छैन।
जब परिस्थितीबस तनाव पैदा हुन्छ, त्यसलाई बिर्सने यत्न गुर्नपर्छ। यसका लागि मनपर्ने गेम खेल्न सकिन्छ, मनपर्ने पुस्तक पढ्न सकिन्छ, घुमफिर गर्न सकिन्छ, मिठो मसिनो खानेकुरा खान सकिन्छ। यावत क्रिया यसकारण गर्न पर्छ कि, मन अन्तैतिर मोडियोस्। किनभने तनाव भनेको मनले लिने कुरा हो।
२.लामो श्वास लिने
हरेक व्यक्तिको अलग(अलग स्ट्रेस प्वाइन्ट हुन्छ। अर्थात् तनावको अवस्थामा रहेका व्यक्ति शरीरका विभिन्न हिस्सामा दुखाईको अनुभव गर्छन् । विशेषतः टाउको, पेट, छाती वा खुट्टामा । यस्तो भएमा लामो सास लिनुपर्छ र कल्पना गरौ कि सो अंगबाट वायूसँगै तनाव पनि शरीर छोडेर बाहिर जाँदैछ । यस कल्पनाका साथै श्वास नलीबाट गहिरो श्वास छाड्नुपर्छ । उदाहरणका लागि यदि स्ट्रेसले गर्दा टाउकोमा दुखाई छ भने गहिरो सास लिनुस र कल्पना गर्नुस कि तपाईंको टाउकोमा अक्सिजन पुगिरहेको छ । केही सेकेन्ड रोकिएपछि कल्पना गरौ कि टाउकोबाट वायुका साथ तनाव पनि बाहिर निस्किदै छ । धेरैपटक यस्तो गर्दा तनाव स्वतः कम हुन्छ।
तनावग्रहस्त हुँदा हल्लाखल्लाबाट टाढा एकान्तमा समय बिताउनु पनि प्रभावकारी हुन्छ । यो आफैंसँग संवाद गर्ने समय हो जसमा सबै समस्याहरुलाई भुलेर आफैंसँग मित्रवत व्यवहार गरिन्छ । आफैसँग वाचा गरौ कि, ती कुराहरुको बारेमा बिल्कुल सोच्नेछैन, जुन तनावको कारण बनेका छन् । बल्कि ती कुराहरुको बारेमा सोचिन्छ, जसले ओठमा मुस्कान ल्याउँछ।
४.आफ्नो रुचीको काम
आफ्नो मनपर्ने काम र शौखले व्यक्तिलाई तनावबाट मुक्त राख्न सहयोग गर्छ । चाहे बगैंचामा टहलिने होस, पेन्टिङ होस, गार्डे्निङ होस वा म्युजिक । हेडफोन लगाएर म्यूजिक सुन्दै तनाव भगाउन चाहने भने बिना शब्दको इन्स्ट्रुमेन्टल ट्र्याक सुनौ । लिरिक्सबाला गित सकभर नसुनौ किनकी त्यसले मनलाई भावुक बनाउँछ । घरमा कुनै जनावर छ भने उसँग समय बिताएर मन हल्का गर्न सकिन्छ।
अक्सर मानिसहरु तनावका लागि परिस्थितिलाई दोष दिन्छन् । तर सत्य के हो भने परिस्थितिलाई नियन्त्रणमा लिन सम्भव छैन । त्यसैले हरेक परिस्थितिमा मनलाई स्थिर र प्रसन्न राख्ने कोशिश गर्नुपर्छ । तनावको सामना गर्न महिलाहरु पुरुषभन्दा अगाडि हुन्छन्।